बजारमै जीप तथा बस पार्किङ, मेयरका कुरा,कुरामै सिमित::समायोजन खबर
बजारमै जीप तथा बस पार्किङ, मेयरका कुरा,कुरामै सिमित
अटेरी व्यवसायी, सडकमा दैनिक पानी हाल्छन बजारवासी
गत असोज २९ गते रत्नपार्कको धुलाम्मे सडकमा नगर बसको उद्घाटनपछि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर दिपनारायण रिजालले घाँटी सुक्ने गरी भाषण गरे । ‘अब कुनै पनि बसहरु, जीपहरु बजारका क्षेत्रहरुमा यत्रतत्र पार्किङ गर्न पाईन्दैन । त्यसलाई हामी कडाभन्दा कडा कारवाही गर्दै अगाडी बढ्नेछौ । जीपहरु हाटडाँडामा लानैपर्नेछ, हामीले दुईवटा बसपार्क निर्माण गरेका छौ । आचार्यटोलमा यौटा वसपार्क छ । सोल्मामा अर्को वसपार्क छ ।’ जोसिदै उनले थपे, यी दुईवटै बसपार्कमा अनिवार्य रुपमा वसहरु पार्किङ गर्नुपर्छ । त्यसकारण म, सम्पुर्ण यातायात व्यावसायी साथीहरुलाई विनम्रतापुर्वक अनुरोध गर्छु । आजैबाट आचार्य गाउँ बसपार्कमा बसहरु पु-र्याउनुस, आजैबाट सोल्माको बसपार्कमा बसहरु पु¥र्याउनुस । यत्रतत्र बसहरु जथाभावी राख्नुभयो भने “अब, नगरपालिका कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न तयार छ । र, कुनैपनी कसर वाँकी राख्दैन ।”
उनको यो भाषण सुनीरहंदा साँच्चीकै लागू होला त भन्ने, दुविधा थियो । नभन्दै त्यो कार्यान्वयन भएन । उनको भाषण हावामा सिमीत भए । १६ दिन (कार्तिक १३ गतेसम्म) पनी यातायात व्यवसायीले बजारमै जीप तथा बस पार्किङ गरीरहेका छन् । भाषणका समयमा ताली पिट्ने त्यही यातायात व्यवसायीले अहिले पनि दिक्तेल बजारको वेसक्याम्प, रत्नपार्कमा बग्रोल्ती बस तथा जीप पार्किङ गरीरहंदा मेयरका कुरा ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्स’ झै भएको छ । खोटाङमा भएका बसहरु एकैसाथमा पार्किङ गर्ने क्षमताको बसपार्क भए पनि यातायात व्यवसायीले पार्किङ गर्न नलानु भनेको मेयरका कुरा नटेरेका हुन् वा च्यालेन्ज गरेका हुन् ? सोल्माको बसपार्कसम्म जान राम्रो सडक छ । यता आचार्य टोलको बसपार्कमा गाडी लान सडक ठिक छ । हाँटडाँडामा जीप लान पनि जेनतेन बाटो राम्रो छ । तर, किन रत्नपार्क र वेसक्याम्प नै प्यारो छ । नगर र व्यवसायीविच केमा कुरा मिलेको छैन ? के कुरा यातायात व्यवसायीलाई पुगेन ?
व्यवसायी बसपार्क र जीप पार्कमा गाडी नलाने बजारमा पार्किङ गर्ने, मेयर भाषण मात्रै गर्ने कार्यान्यवन गराउन नसक्ने आदतले व्यवसायी थेत्तर बनेका छन् । खोटाङ यातायात प्रालिका अध्यक्ष विष्णुकुमार श्रेष्ठले भने, नगरपालिका, प्रहरी, प्रशासनलाई पत्रचार गरेकै हौ । कोही चासो दिन्न । ट्राफिकले कडाभन्दा कडा कारवाही नगरेकाले पनि बस तथा जीप बजारमै राखेको बताए । सोही लगत्तै खोटाङका ट्रफिक प्रहरी ईन्चार्ज नरेन्द्र पौडेललाई फोनबाट प्रश्न गर्दा रस्साकस्सी तवरमा ‘खै कहाँ छ यहाँ बस, यौटा पनि छैन ।’ आएर हेर्नुस त भनेका थिए । भोलीपल्ट हेर्न जादा बसहरु बाम्राङको रमितेढुंगादेखी सोल्माको अल्छेढुंगासम्म र वेसक्याममा जीपहरु सडकका दायावाया थिए । अहिले पनि छ । पुरानो यातायात व्यवसायी खोटाङ यातायात प्रालि भन्छ । हाम्रो वस त लान्छौ तर, यहाँ हाम्रो प्रालिको मात्रै बस तथा जीप छैन । त्यसको कसले लेखाजोखा गर्छ ? ट्राफिक प्रहरी काम गरीरहेका छौ भन्ने, यातायात व्यवसायी दोष दिईरहने ? कामको प्रगती नदेखिने ?
मेयर माईकमा भाषण गर्दै गर्छन् । व्यवसायी बजारलाई जीप तथा बस पार्किङ स्थल बनाई राख्छन् । गज्जब छ ! यो दोहोरीको चपेटामा बजारवासी र विधार्थी वाक्कदिक्क भए छन् । बजारलाई पार्किङ निषेध क्षेत्र बनाउने मेयरका सपना र व्यवसायीले पार्किङस्थलमा बस, जीपहरु लानु दिवा सपना भएको छ । एकाथरी भाषण गर्दै हिड्ने अर्कोतिर मनपरीतन्त्र लाद्ने कामले मेयर असफल मेयरका नामले कहलिन थालेका छन् । भुक्तभोगीहरु भन्छन् । “नगरले चाहेमा के गर्न सक्दैन ? काम गर्नु त कहाँ हो कहाँ ‘कसको मान्छे, कुन पार्टीका मान्छे’मा सिमित हुन्छन् अनि योजना, भाषण तुहिएर जान्छन ।”
झण्डै डेढ वर्षसम्म एउटा समस्यालाई सल्टाउन नसक्दा बजारवासी र पाहुनाहरुलाई विहानदेखी साँझसम्म धुलोका कारणले नाक छोपेर बजारमा यात्रा गर्नुपर्ने वाध्यता छ । पसलमा राखेका सामानहरु धुलैधुलोले नचिन्ने भएको छ । बस तथा जीपलाई पार्किङ स्थलमा पठाउन नसक्दा नगरमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । व्यवसायी र नगरविच साठगाँठ त छैन ? त्यसै त साँघुंरो दिक्तेलबजारमा ठूलाठूला यात्रुवहाक बस गुडाउने, जताततै पार्किङ गर्ने प्रवृत्तिले बजारवासीहरु कहिले दुर्घट्नामा पर्ने हो टुङ्गो छैन । नगरपालिकाले चाहाना गर्ने तर, कार्यान्वयन गराउन नजान्ने आदतले व्यवसायी झन बलियो भन्दै गएको छ ।
नगरले साँच्चीकै बजारलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने हो भने, बस तथा जीपलाई बसपार्कमा लानैपर्छ । त्यसका लागि भाषण मात्रै गर्नुपर्छ की कार्यान्यवन पनि गराउनुपर्छ त्यो सम्बन्धित निकाय जानुन् । बसपार्कसम्म पुग्ने सडकलाई बनाउनु पनि पर्छ की सस्तो लोकप्रियता कमाउन चाबी खोसेर मात्रै हुन्छ ? व्यवसायीहरुले पनि भाषण सुनिन्जेल ताली पट्काउने र मुन्टो मात्रै हल्लाउने ? नगर तथा बजार हाम्रो पनि हो भनेर सोच्ने ? कि पैसाकै पछि लागेर बजारमै पार्किङ गरीरहने, बजार सबैको हैन । पाहुनाहरु आउँदा बजार हेर्दा कस्तो बजार भनेर नाम कहलिदैन ?
सडकमा दैनिक पानी हाल्छन बजारवासी
अव्यवस्थित बस तथा जीप पार्किङको चपेटामा बजारवासी परेका छन् । व्यवसायीले जथाभावी पार्किङ र बजारमा ठूलाठूला मालवहाक, यात्रुवहाक बस गुडाउदा कच्ची सडक खोतलिने धुलो उड्ने हुनाले दैनिक सडकमा पानी हाल्नुपर्ने बजारबासीलाई बाध्यता छ । विहान रत्नपार्कदेखी हाँटडाँडासम्मका घरका एकजनाको ड्युटीनै पानी खोजेर सडक भिजाउने रहेकोे छ ।
२०७५ कार्तिक १३ मध्यान्ह १ बजे प्रकाशित